Umthi wokulwa notshintsho lwemozulu: iKiri | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | | Faka co2, Yendalo
Esinye sezisombululo zokulwa Utshintsho lwemozulu kunye nobushushu behlabathi kukunyuka kwemimandla enamahlathi. Kungenxa yokuba imithi ifunxa i-CO2 esiyikhupha kwimisebenzi yethu nakwezothutho. Iindawo eziluhlaza ngakumbi ezikhoyo kwiplanethi, kokukhona i-CO2 iya kufakwa.
Nangona khusela amahlathi kwaye wandise iihektare zawo kubalulekile kwikamva lethu, umntu unyanzelisa ukubatshabalalisa ukuze bavelise iinkuni okanye bathengise ngazo. Kuzo zonke iintlobo zemithi ezikhoyo ehlabathini, kukho omnye ngokukodwa onokusinceda kakhulu kumlo ochasene notshintsho lwemozulu. Imalunga neKiri.
1 Imeko yehlabathi yamahlathi
2 Umthi osinceda ngokuchasene notshintsho lwemozulu
3 Waziwa njani lo mthi?
Imeko yehlabathi yamahlathi
Kuwo wonke umhlaba bayanqunyulwa kwaye batshatyalaliswe malunga nezigidi ezili-13 zehektare ngonyaka ngokwedatha efunyenwe kwi-UN. Ngaphandle kokuba sixhomekeke emithini ukuba siphile kwaye siphefumle, sizimisele ukuyitshabalalisa. Izityalo nemithi yimiphunga yethu kwaye kuphela kwendlela esinokuhlala siphila ngayo njengoko zinika ioksijini esiyiphefumlayo.
Umthi osinceda ngokuchasene notshintsho lwemozulu
Lo mthi onokusinceda kwidabi lokulwa notshintsho lwemozulu ubizwa IKiri. Igama layo lenzululwazi ngumthi wempress okanye uPaulownia tomentosa. Ivela China kwaye inokufika ukuya kuthi ga kwi-27 yeemitha ukuphakama. Umboko wayo ungaphakathi kweemitha ezisi-7 ukuya kwezingama-20 ubukhulu kwaye unamagqabi amalunga neesentimitha ezingama-40 ububanzi. Indawo yokuhanjiswa kwayo ihlala ivela kubude obuphantsi kune-1.800 yeemitha kwaye inokuphila kwezi ndawo nokuba kuyalinywa okanye kuyasendle.
Umthi onezi mpawu uhambelana nenkangeleko yesiqhelo yawo nawuphi na umthi. Kodwa kutheni le nto iKiri ngokukodwa inakho ukufaka isandla ngaphezulu kunabanye kumlo ochasene notshintsho lwemozulu?
Yonke imithi eluhlaza, izityalo kunye namatyholo photosynthesize, ukufunxa i-CO2 okusingqongileyo ukuyiguqula nokukhupha ioksijini. Nangona kunjalo, phakathi kweempawu ezenza ukuba iKiri ikhetheke ukuba ibe ngumgqatswa osinceda ngokuchasene notshintsho lwemozulu sifumana amandla okucoca umhlaba ocekeceke ojikelezileyo kwaye kananjalo ukufunxwa kwayo kwe-CO2 kukuphindwe kalishumi kunalo naluphi na olunye uhlobo lomthi.
Ngenxa yokuba inqanaba lokufunxwa kwe-CO2 likhulu kakhulu kunaleyo yonke indalo, kunjalo nakwinqanaba lokuvelisa ioksijini. Enye yezinto ezingalunganga ekuhlaleni kwamahlathi lixesha elithathwayo ukuze imithi ikhule kwaye ibenendawo eyaneleyo yamagqabi ukuze ikwazi ukufaka isandla kuyo. ibhalansi ye-O2-CO2 yeplanethi. Nangona kunjalo, iKiri ikhula ngokukhawuleza kakhulu kunezinye iintlobo. Ngowona mthi ukhula ngokukhawuleza kwiplanethi iphela, kangangokuba kwi yiminyaka esibhozo kuphela enokufikelela kubude obufanayo nom-oki malunga neminyaka engama-40 ubudala. Ngaba uyazi ukuba yintoni leyo? Ukulondolozwa kweminyaka engama-32 kumahlathi. Ukwenza ukulingana ukukunika umbono ongcono, lo mthi unokukhula kumhlaba oqhelekileyo umndilili weesentimitha ezi-2 ngosuku. Oku kuyanceda ukuba ngokuhlaziya iingcambu zayo kunye neenqanawa zokukhula kwesiqu, inokumelana nomlilo ngcono kunezinye iintlobo.
Lo mthi unamandla amakhulu okuhlaziya njengoko unokuphinda uhlume kude kube kasixhenxe emva kokusikwa. Ingakhula kumhlaba ongcolileyo nakumanzi kwaye, ngokwenza njalo, icoca umhlaba kumagqabi ayo atyebile nge-nitrogen. Ngexesha lokuphila kwawo, umthi uchitha amagqabi awo kwaye xa ewela emhlabeni ayabola kwaye anike izondlo kuwo. Kufuneka sikhankanye ukuba ukuba lo mthi ukhula kumhlaba ongcolisekileyo okanye unezinongo ezimbalwa, ukukhula kwawo kuya kuhamba kancinci kunokuba ukhula kumhlaba otyebileyo futhi onempilo. Ukuze ikwazi ukuphila kwaye ikhule ngokufanelekileyo kumhlaba ohluphekileyo nonomhlaba, kufuneka umgquba kunye neenkqubo zokunkcenkceshela.
Waziwa njani lo mthi?
Igama lalo lithetha "ukusika" ngesiJapan. Umthi wayo uxabiseke kakhulu kuba unokuthenwa rhoqo ukuze ukhule ngokukhawuleza kwaye uwusebenzise njengobutyebi. Kwiinkolelo nezithethe zaseTshayina, lo mthi we-Empress watyalwa xa kuzalwa intombazana. Ngenxa yokukhula ngokukhawuleza komthi, wawuza kuhamba nentombazana kubo bonke ubuntwana bayo kunye nokukhula kwayo, ngendlela ethi xa ikhethelwa umtshato, unqunyulwe umthi kwaye imithi yawo isetyenziselwe ukwenza izinto zokuchwela .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Umthi wokulwa notshintsho lwemozulu: iKiri
Hugo ferrari sitsho
UKiri waziswa e-Uruguay yinjineli yezamahlathi uJosef Krall kwaye izilingo zazingasebenzi. Bangeniswa ukuze bakhule ngokukhawuleza kodwa ukungunda akuzange kuziqhelanise nabo. Kukho iintlobo zokungafani kwemfuza ezingabavumeli ukuba baziqhelanise
Phendula Hugo Ferrari
Ngaba kunokwenzeka ukuba isiqithi sibonelelwe ngamandla ahlaziyekayo kuphela?